I-CD ye-GIS yokuFunda, imithombo enamandla yokufundisa - i-Geofumed
I-CD ye-GIS yokuFunda, imithombo enamandla yokufundisa
NgoJanuwari, 2010 Ukufundisa i-CAD / GIS
Ezona zinto zibalaseleyo ndizibonile, ezinokubaluleka xa zifundisa kwingingqi yolwazi lwendawo.
Le yi-CD ye-GIS yokuFunda, imveliso yenkampani yokwakha ye-SuperGeo umgca, apho, ngaphaya kokuba yimveliso yabaqeqeshi, inokudlala indima ebalulekileyo ekuqeqesheni okuzifundisayo.
Isibhengezo siphumelele kwiprogram entsha yeGeinformatics, kubonakala kulungelelanisi abaqashileyo, abangaba yiingcali kwiJava, .NET okanye i-PHP, kodwa ngelixesha lokwenza uphuhliso lwe-geospatial bafuna ukuqeqeshwa kwisifundo se-GIS. Olunye ulungelelwaniso lwentsebenziswano yangaphandle oya kuqesha imisebenzi efana nokulungiswa kwezicwangciso zoqeqesho, ukulungelelaniswa kwamava, ukuhlaziywa komhleli, okanye iimpawu ezifanayo ezifunekayo kodwa zifuna ukwazi umhlaba jikelele ngaphandle kokusebenza.
Izahluko ezimbini zokuqala ziqokelela izinto eziphathekayo ezizityebi, kubandakanya iigama ze-GIS, imvelaphi yentuthuko yabo e-United States naseKhanada, iziganeko ze-GIS, kunye nesicelo sabo ekulawuleni izibonelelo zendalo kunye nocwangciso. Iimpawu zemizekelo yolwazi, iinkqubo zoqhagamshelwano, izicwangciso, izikali, ubuxhakaxhaka kunye nolwalamano lwendawo luxutyushwa.
Kwizahluko ezilandelayo, inkqubela phambili isenziwa ngokuthe ngcembe ekungeneni kolwazi, ukuthunyelwa, ukubonisana, ukucwangciswa nokupapashwa kweziphumo. Le ngongoma yezahluko:
Isahluko 1. GIS Concepts
Isahluko 2. Idatha yolwazi
Isahluko 3. Ukungena kwedatha
Isahluko 4. Ukuthunyelwa kwedatha
Isahluko 5. Umbuzo wedatha
Isahluko 6. Ukucwangcisa nokuhlalutya
Isahluko 7. Ukupapashwa kwedatha
Umgangatho we-didactic wezinto eziphathekayo ulungile kakhulu, wakhiwa kwi-Flash, eneempawu ezifanelekileyo kakhulu kunye nentambo yokuziphatha engenakufaneleka. Ngokuqinisekileyo kubhekiselele ngokubanzi ukuqeqeshwa, kwinkampani Umhlaba ka-Google, ngokuba i-SuperGeo iqinisekile ukuba iyisisitye esiya kukhuthaza umgca wayo wemveliso, leyo nangona ifuna imfuno ebalulekileyo kwiMpuma Ekude, ayifumanekanga kwindawo yethu.
Ukuzisola ngokuba okwangoku ngesiNgesi kuphela, ndiyazi ukuba kule ngxaki kuyinselele kwimimandla emininzi, kodwa eklasini inyaniso yohlukile. Idiski ibiza i-$ 50, isebenza kwiimeko ze-Windows kunye ne-Mac, ingazithengwa nge-Paypal.
Ekugqibeleni, umdlalo olungileyo wokufunda, ukufundisa nokubeka uluhlu olufunayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GaliciaCAD, ezininzi iinkonzo zamahhala
Post Next uDig, ukuqala ukucingaOkulandelayo "